Global Voices teny Malagasy » “Tsy Miresaka Afa-tsy Politika” Sisa Ilay Blaogera Krimeana Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Septambra 2014 17:35 GMT 1	 · Mpanoratra Daniel Alan Kennedy Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Okraina, Rosia, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Sivana, Voina, Akon'ny RuNet
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny famakafakana mivelatra momba ny tontolon'ny blaogy mpiteny Rosiana ao Okraina Atsinanana tontosain'ny RuNet Echo . Fakafakao manontolo ny andian'antsafa ao amin'ny pejin'ny Eastern Ukraine Unfiltered .
Tsy mba mpiresaka politika mihitsy i Georgiy Sedelnikov, 30 taona teraka tao Sevastopol. Na dia liana tamin'ny resaka politika aza i Sedelnikov, izay mamahana pejy LiveJournal amin'ny anarana Strajj , dia resaka fakana sary ny natiora, kolontsaim-bahoaka, tantara mampihomehy avy ao amin'ny internet, ary ireo lanonana ao amin'ny tanindrazany no tena anehoany hevitra. Tsindraindray tadiavina ihany izy no maneho hevitra politika ao Rosia, Okraina ary avy amin'izao tontolo izao.
Nisintaka tamin'ny fihetsiketsehana Euromaidan hatramin'ny voalohany ny fijerin'i Sedelnikov, tamin'ny namoahany lahatsoratra blaogy tamin'ny 24 Novambra mitondra ny lohateny hoe “F*ck this E€uromaidan .” (Ompaiko ity €uromaidan ity).
Nahatonga an'i Sedelnikov ho maro fahavalo ny fomba fijery, ary ao anatin'izany, araka ny nolazainy, ireo ao amin'ny raharaham-pilaminana sy fiarovana okrainiana, izay efa nanara-maso azy taloha. “Efa nandray anjara tamin'ny fihetsiketseha-panehoan-kevitra maro aho ary arahin'ny SBU (Sluzhba Bezpeky Ukrainy , sampam-pitsikilovana okrainiana) maso hatrany ireo mpandray anjara amin'izany.” Nitantara i Sedelnikov fa efa voarahona tamin'ny fitoriana eny amin'ny fitsarana izy tamin'ny fanohanana ny fisintahana ary efa nahazo fandrahonana maro avy amin'ny olon-tsy fantatra izy sy ny fianakaviany, na izany tamin'ny alalan'ny mailaka na izany tamin'ny alalan'ny famoahan-kevitra ao amin'ny pejy LiveJournal.
Sedelnikov no ohatra velona amin'ny vokatry ny fifanandrinana ao Okraina amin'ny blaogera maro, tahaka an'i Colonel Cassad . Taloha moa izany raha liana amin'ny fizarana izay mahaliana sy votoaty mampiala voly i Sedelnikov, fa tsindraindray ihany no mba niresaka ny tontolo politika, ankehitriny ny blaoginy dia miompana manontolo amin'ny fitantarana ny ady ao Okraina Atsinanana sy ny fifanenjanana eo amin'i Okraina sy i Rosia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/06/63850/
 F*ck this E€uromaidan: http://strajj.livejournal.com/2250629.html
 Sluzhba Bezpeky Ukrainy: http://en.wikipedia.org/wiki/Security_Service_of_Ukraine
 Colonel Cassad: https://globalvoicesonline.org/2014/07/30/russia-eastern-ukraine-unfiltered-colonel-cassad-crimea-stalinism/